I-Cuevana3 APK Ukulanda kwe-Android [Buka ama-movie 2022] - I-Luso Gamer
Ukulanda kwe-APK ye-Cuevana3 ye-Android [Buka ama-movie 2022]
ICuevana isibe iwebhusayithi ejwayelekile kakhulu yeArgentina bebonke nabantu abakhuluma iSpanishi. Uhlelo lokusebenza lweCuevana lweselula lwaludingeka isikhathi eside, futhi ekugcineni sine-Cuevana3 APK.
Ungangena futhi wenze noma yini oyenzile kuwebhusayithi esemthethweni, manje usebenzisa uhlelo lwabo. Nalesi sicelo ku-smartphone yakho, iba yidivayisi yokusakaza yokuqukethwe yeSpanishi.
Ukuthola lolu hlelo lokusebenza olumangalisayo, kufanele uthole inketho yokuyilanda. Ngemuva kwalokho ungathepha kuyo ukuze uthole i-APK yefoni yakho ephathekayo ye-Android noma ithebhulethi.
Mayelana neCuevana3 APK
Kuyinto isicelo esemthethweni Android Cuevana. Iwebhusayithi yase-Argentina esekelwe enikeza zonke izinto zokuzijabulisa ezinhle kakhulu ezivela kuwo wonke umhlaba ngemibhalo engezansi yeSpanishi.
Yathulwa ngo-2009, indawo yaba igama elijwayelekile ezweni lonke njengoba abantu abaningi baqala ukuyivakashela ukuthola ama-movie wamahhala, amadokhumenti nezinsizakalo ezivela emhlabeni wonke.
Kusebenze njengehabhu lokuxhuma elivumela izivakashi ukuthi zisakaze amavidiyo wokuzijabulisa ngokuqondile.
Ngokusebenzisa i Uhlelo lokusebenza lwe-Movie ungafinyelela amavidiyo anencazelo ephezulu (i-HD) avela emhlabeni wonke. Ngemibhalo engezansi ngolimi lwakho. Ngakho-ke uma uvela eLatin America noma eMelika Ephakathi, lolu hlelo lokusebenza olwakho.
Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ubuke ngqo noma ulande noma iyiphi ifilimu oyithandayo. Ungayikopisha kwisitoreji sakho sendawo noma uyibuke online. Konke kumahhala, futhi ngeke ukhokhiswe ngisho isenti elilodwa.
Usayizi 6.0 MB
Unjiniyela Inkampani SpaceMovil Inc
Igama lephakheji i-peliculas.cuevana
Iyadingeka i-Android 4.0.3 nangaphezulu
Uma ungumthandi we-movie noma ufuna ukubuka lonke uchungechunge oludumile oluvela emhlabeni wonke ungakwenza lokho lapha kuCuevana3 APK. Konke okudingeka ukwenze ukulanda ifayela le-APK kusuka kusixhumanisi esinikezwe ngezansi kwalesi sihloko.
ICuevana3 ihlukanisa ividiyo yakho uma uyixhuma kuyo. Thola imidiya yakho oyithandayo ngoku ngokuthepha kuthebhu njengokususelwa kuhlobo ukuthi uthanda isenzo, i-adventure, romance, inganekwane, noma i-thriller. Noma vele uthole ama-flicks asuselwa ngonyaka wokukhishwa.
Uma ungakwazi ukunquma ukuthi yini okufanele uyibuke ngokulandelayo, vele uye esigabeni esibukelwe kakhulu futhi uzothola lokho abanye abantu ababuka kamuva nje.
Thola yonke injabulo esikrinini sakho se-Android ngokulanda i-Cuevana3 APK kusuka enkingeni enikezwe ngezansi.
Izigaba Apps, Ezokuzijabulisa Amathegi ICuevana3 APK, Uhlelo lokusebenza lweCuevana3, Uhlelo lokusebenza lwe-Movie Imeyili kwemikhumbi
I-Xhamstervideodownloader APK Ukulanda okwe-Android 
Ukulanda i-APK ye-PatoPlayer ye-Android [Yakamuva ngo-2022]